MANOMANA NY HO AVY ISIKA
Nandritra ny fananganan-tsaina voalohany ho an’ity taona 2020 ity no nanatanterahan’ny mpiasa sy ny tompon’andraikitra teto amin’ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny haitao ara-kajy mirindra ny fiarahabana ny Ministra RAMAROLAHY Christian nahatratra ny taona vaovao sy nanolorana ny solom-body akoho amin’ny maha ray aman-dreny azy eto amin’ny Ministera.
Efa nanomboka napetraka ny fanovana sy ny fampivoarana ny Ministera tamin’iny taona lasa iny, hoy Andriamatoa Ministra nandritra ny lahateniny. Amin’ity taona ity dia ho tohizana izany fanomanana ny ho avy izany.
Eo amin’ny Paositra dia efa mandroso ny fanavaozana ny birao eto Antaninarenina, sy ireo birao maromaro eto andrenivohitra. Hanatsara ny tolotra omena ny mpanjifa izany.
Ho an’ny fifandraisan-davitra sy ny haitao ara-kajy mirindra, efa vita sonia ny fifanaraham-piarahamiasa amin’ny firenena sinoa ho fanatsarana ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Hitondra ilay fiovana eo amin’ny asa sy ny fandehanan’ny raharaham-panjakana izany.
Tsy adinoina ny momba ny mpiasa sy ny lafiny sosialy, efa natao ary mbola ho tohizana ny fanangonana ny tanin’ny Ministera manerana an’i Madagasikara mba ahafahana manomboka ny tetikasa fanomezana trano ho an’ny mpiasan’ny Ministera.
Ny irariana amin’ity taona ity hoy ny Ministra dia handeha an-tsakany sy an-davany ny asa eto amin’ny Ministera. Notsindriany fa ny asa rehetra atao dia ho an’ny fampandrosoana ny firenena sy ho an’ny Vahoaka Malagasy fa tsy ho an’olon-tokana.